Ufanise izitha zakhe nezinja umkaNcwane | isiZulu
Ufanise izitha zakhe nezinja umkaNcwane
Zama Ndukude, ILanga
Durban - "Ningangiyeki ngidliwe yizinja zize zingiqede," usho kanje ekhwela edilika kwabamzondayo u-Ayanda Ncwane emcimbini wokugubha usuku lokuzalwa komyeni wakhe obeyisilomo somculo wokholo ongasekho emhlabeni, uSfiso Ncwane.
Uwuphendule inkundla yokuthuka izitha zakhe umcimbi wokugubha usuku lokuzalwa komyeni wakhe u-Ayanda.
Umfelokazi kaSfiso, u-Ayanda ubekhuluma ngoMgqibelo eMantiyaneni Sport Ground eMthwalume, eningizmu yeKwaZulu-Natal, emcimbini wokubungaza usuku lokuzalwa lukaSfiso oshone ngonyaka odlule.
"Ningangiyeki ngidliwe yizinja zize zingiqede. Ngilweleni nami njengoba namlwela noSfiso. Yenzani kimi lokhu enanikwenza kuyena. Konke obekwenziwa nguNcwane sekuphezu kwamahlombe ami, ngiyacela nami ningeseke njengoba benimeseka naye," u-Ayanda ubenxenxa izakhamuzi zaseMthwalume lapho bekwenzelwe kona umcimbi.
U-Ayanda utheleke kulo mcimbi ehamba nonogada abebemqaphile abebala ukhasha ukuthi kusondelwe eduze kwakhe.
Enkulumeni abeyethula ugcine engaphumelanga obala ukuthi ngobani laba ababiza ngezinja ezifuna ukumqeda, unqabile ukucacisela neLANGA selimcela ukuthi acacise ukuthi ngobani izinja.
Uphendule kanje ebuzwa ngezinja: "Umthetho wami angisasebenzisani nabamaphepha futhi angisakhulumi nanabo," usho kanje wabe esethathwa onogada bakhe.
Okuqaphelekile wukuthi ubekhuluma ebhinqa futhi egadwe yinqwaba yonodaga ebebehlome ngezinhlokohlela zezibhamu.
Ukhulume nezihlwele ebezigcwele enkundleni yebhola, eMantiyaneni wathi usebuyile manje njengomakoti waseMthwalume.
"Ngisemzini uma ngila. Abantu ababaluleke kakhulu yinina bantu basemzini, ngisho kunina bantu baseMthwalume. Ngithe mangibuye ngizonitshela ukuthi ngisekhona. Isethembiso engizosenza namhlanje kinina ngesokuthi angiyi ndawo. Ngifisa nazi ukuthi mina angiseyena owaseNdwedwe kodwa sengingowaseMthwalume," kusho uAyanda.
Ube esecela enkosini yendawo, uMnu Thembinkosi Nzama ukuba imsikele inxiwa
"Izikhwama zami angizipakishanga ngagoduka ngoba ngingowala. Inkosi uma ingakwazi, ngicela isale isingisikela indawo mhlambe ngibuye ngizokwakha. Kwakuyiphupho lika Ncwane lelo ukuthi abe nomuzi la akhulela khona," kusho uAyanda.
OLUNYE UDABA: Ukhihla esikaNandi umama kaSfiso Ncwane ngencwadi yenkantolo
Ubuye watshela umphakathi ukuthi uqale wayokhuluma noSfiso emathuneni ngaphambi kokuza kulo mcimbi.
"Ngaphambi kokuba ngize la, ngiqale ngayokhuluma naye ethuneni lakhe. Ngifike ngamtshela ukuthi namhlanje ngibuyela eMthwalume, ngiyoqinisekisa abantu ukuthi angiyi ndawo. Bengihamba nezingane safike sahlanza nethuna lakhe. Lokhu bengikwenza ngoba bengifuna abone ukuthi impela wayethathile," echaza.
Uthe umphakathi waseMthwalume yiwona omazi kahle. "Bangazikhulumela nje abanye abantu kodwa nina ningazi kahle ukuthi ngingubani hhayi le nto enihlala nifunda ngayo emaphepheni. USfiso wenu ubenezingane eziyisithupha njengeminwe yakhe eyisithupha. Bengithi maningitshele ngoba anazi," usho kanje.
Izihlwele zivele zamemeza khona lapho zimbuza ukuthi pho zikuphi lezo zingane.
Ngaphambi kokuba aphendule izihlwele uqale ngohleko oluncane wabaphendula wathi: "Omama bazo bazigodlile, kulungile ke. Abathandi ukuthi izingane zabo zibe semehlweni abantu futhi nami ngiyasihlonipha isinqumo sabo. Kodwa uNcwane wenu ubenezingane eziyisithupha."
U-Ayanda uqinisekise uphakathi ukuthi usuku lokuzalwa lukaSfiso luyohlezi lubungazelwa eMthwalume.
"Ngiyanithembisa ukuthi usuku lokuzalwa lukaNcwane luyohlezi lubungazelwa la. Ngiyohlezi ngila,"
Inhloso yalo mcimbi ibiwukubuyisela emphakathini, njengoba uSfiso ubejwayele ukwenza minyaka yonke uma kuwusuku lwakhe lokuzalwa.
USfiso esaphila ubejwyele ukuphisana ngemifaniswano nezicathulo zesikole ezinganeni zangakubo. Kodwa kulokhu akwenzekanga lokhu futhi asibanga khona nesizathu esibekiwe.
IMeya yoMasipala wasogwini, uMnu Mondli Chiliza ukhuthaze u-Ayanda waphinde wameluleka wathi: "Siyawuncoma kakhulu lo msebenzi owenzayo futhi siyawujabulela sizohlala sikweseka njalo. Kodwa sicela ungabakhohlwa abantu balapho kuzalwa khona uSfiso," kusho uMondli.
Ebuzwa ngalenkulomu yakhe uMnu Chiliza uthe : "Njengomasipala asikwazi ukungenelela ezinkingeni zomndeni kodwa uma ekhona phakathi kwabo ocela singenelele ukuze idlule le nkinga singangenelela,"
Inkosi yendawo KwaQoloqolo, uMnu Thembinkosi Nzama uthe uSfiso unawo umndeni kwaQoloqolo. "Uma u-Ayanda efuna indawo uzosondela sikhulume. Kodwa engifuna kucace wukuthi ikhaya likaSfiso livele likhona lapha kwaQoloqolo," kusho Inkosi.
Kunandise abaculi abahlukene phakathi kwabo singabala uDumi Mkokstad, Jumbo, Bethusile Mcinga, Sgwili Zuma, Thokozani Langa nabanye.